अनुजा प्रधानको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता – www.EUnepal.com
HomeDiasporaअनुजा प्रधानको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता
March 2, 2017 Kejin Rai Diaspora, News, Photo 0
ब्रसेल्स बेल्जियम, मार्च २ ।
आसन्न नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको चौथो अधिवेसनमा वर्तमान उपाध्यक्ष अनुजा प्रधानले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेकी छिन् ।
अब प्रधानको उम्मेद्वारी दर्ता संगै आगामी अधिवेसनमा सिता सापकोटा र माधव सापकोटा सहितको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने निश्चित भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला मुख्य अतिथि रहने अधिवेशनमा मार्च ५ मा सर्वसम्मति हुन नसके १२ मार्चमा चुनाव हुनेछ ।
बर्तमान उपाध्यक्ष र अध्यक्ष प्रत्यासी अनुजा प्रधानको प्रतिबद्धता तल ….
यस कारण जनसंपर्क समिति बेल्जियमको अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारी – अनुजा प्रधान
१) नेपाली जनसंपर्क समिति बेल्जियमको आसन्न चौथो अधिवेसन आगामी ५ मार्च २०१७ मा हुन गैरहेको र नयाँ नेतृत्व छनौटको लागि चुनाव अधिवेसनको एक हप्ता पछाडि मार्च १२ मा हुन गैरहेको सर्व विदितै छ । वर्तमान उपाध्यक्षको हैषियतले राजनैतिक निरन्तरता र जनसंपर्क समिति बेल्जियमको बृह्तर हितका लागि एउटा स्पस्ट दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्ने र संगठनलाई एउटा नयाँ शिरामा पराउनेु विशुद्ध लक्ष्य अन्तरआत्ममा अंकुरित थियो नै । यस विचमा धेरै अग्रजहरुको सहयोगको आश्वासन र धेरै जनसंपर्क समितिका सदस्यहरुको उत्प्रेरणाका कारण आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएको छु।
२) उर्जाशिल महिला, युवा तथा नेपाली समुदाय बेल्जियमा गत एक दशकबाट कृयाशिल र वर्तमान उपाध्यक्षको हैषियतले एक पटकलाई मेरो नाममा सर्वसम्मती बनाइदिनुहुन सवैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। निश्पक्ष्य तथा स्वस्थ्य प्रतिपर्धा लोकतन्त्रको गहना हो भन्ने मर्मलाई हामीले ह्दयदेखि आत्मसाथ गरेको छु । यहाँको जनादेशलाई सधै ग्रहण गर्ने छु । संगठनमा नेतृत्वमा प्रतिपर्धा पश्चात यस्को नतिजालाई सहर्ष स्विकार गर्दै सदैव संगठनको मुलप्रवाहमा रहेर संगठनलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
३) नेपालको लोकतन्त्र, समाजबाद तथा राष्टियताका लागि प्रवासबाट ऐक्यवद्धता जनाइने छ । आगामी कार्यकालका लागि जनसंपर्क समितिको अभिलेख, साधारण सदस्यता, कृयाशिल सदस्यताहरुलाई नयाँ प्रविधिहरुमा रुपान्तर गरिने छ । हातमा फर्म र कलम समातेर घर घर जानुपर्ने अवस्थालाई विस्थापन गरिने छ । वर्तमान जनसंपर्क समितिले सुरु गरेको द्धन्द प्रभावित अक्षय कोषलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन मा ल्याइने छ । बेल्जियमको नेपाली समुदाय विचको सद्भालाई अझै प्रभावकारी बनाइने छ । जनसंपर्क समिति बेल्जियमको तर्फबाट बेल्जियमको स्थानिय संघसंस्था समेतको सहकार्यमा नेपालको कुनै एउटा क्षेत्रमा विशिष्ट खालको परियोजना संचालन गर्ने र नेपालको विभिन्न दैवी प्रकोपहरुमा सहयोग गर्ने जस्ता कामहरुमा हामी नेतृत्वमा रहँदा गरिने छ । जनसंपर्क समितिका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने मेरा आगामी कार्ययोजनाहरु रहेका छन् ।
४) धेरै मित्रहरुको सहयोगको आश्वसान मिलेको छ । म पनि मेरो नेतृत्वमा टिम नै घोषणा गर्ने क्षमता राख्दछु भन्ने लाग्दछ । तर हामीले विगतलाईलाई पनि विष्लेशण गर्न पर्दछ । करिव १३ सय साधारण सदस्यहरुलाई ग्रास लेभल सम्म ३ समुहमा विभक्त गर्दा यस्ले संगठनलाई दिने परिणामका बारेमा गम्भिर भएर मैले संगठनको श्रीबृद्धिका लागि टिम बनाउन अनुपयुक्त महसुस गरेर टिम नबनाएको स्पस्ट पार्न चाहान्छु ।
५) नेपाली जनसंपर्क समिति बेल्जियमको चुनाव आउदै गर्दा म लगायत आदरणिय सिता सापकोटा दिदी र माधव सापकोटा दाजु पनि म संगै रेसमा हुनुहुन्छ । उम्मेद्वारी घोषणाको पुर्वसन्ध्यामा यहाँहरुले पार्टि तथा सामाजिक लाइनमा गर्नु भएको योगदानलाई समय दिएरै पढेकी छु । यहाँहरुले फेहरिस्त राख्नु भएको छ । यति धेरै काम गरिसक्नु भएका अग्रजहरु अव आफुले गरेको कामको परिणाम हेर्न र तपाँइहरुको योगदानले समाजमा भएको रुपान्तरणको नतिजालार्इृ हेर्न म सुझाव दिन चाहान्छु । केन्द्रिय भुमिकाको अवसर पाइसक्नु भएकाहरुले बेल्जियमको स्थानिय जिम्मेवारी किन चाहियो ? हामीजस्ता अवसर पाइ नसकेकाहरुलाई अवसर दिन सक्नु पर्दछ । यो नै हामी काँग्रेसजनहरुको विरसता र संस्कार हो ।
६) अन्तमा, मेरो इमान्दारिता नै मेरो उम्मेद्वारीको आधार हो । बेल्जियमको नेपाली जनसंपर्क समितिहको इतिहाँसलाई हेर्न म सवै साधारण सदस्यहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । संगठनमा कति आरोह अवरोह भएका छन्, संगठनलाई संकट पर्दा व्यक्तिगत कुण्ठाहरुलाई दवाएर कस्ले संगठनको अनुसशासनमा रहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सवै मतदाताहरु विवेकशिल हुनुहुन्छ । म कसैलाई हराउन वा जिताउन आएको आरोपको खण्डन गर्न चाहान्छु । अनुजा प्रधान बेल्जियममा रहेका सवै अनुशाशित सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हो । संगठनका हितका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा भने आँफु बाधक नभएको समेत स्पस्ट पार्न चाहान्छु ।
यहाँहरुले दिने भएको जनादेशको सम्मान र सवैको भावानाहरुको संवोधन गरिने प्रतिवद्धता सहित ।
नेपाली जनसंपर्क समिति बेल्जियम